ဗုဒ္ဓနည်းမကျ ရန်လိုသော လှုံ့ဆော် အော်ဟစ်မှုများကို ဘီးလင်းမြို့ခံသံဃာ တားမြစ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့် အစ္စလာမ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောခဲ့သည့် အမှာစကား
DVB’s Bigot Reporter Inciting Racism »
Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး,မတ်လ ၁ ၊ ၂၀၁၃ M-Media နေသစ်ထွန်း
This entry was posted on March 2, 2013 at 8:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.